China Polycarbonate Mirror ifektri kanye nabaphakeli | Isi-Donghua
Polycarbonate Miphutha, I-PC Mirror, Ishidi Elilinganisiwe lePolycarbonate
Njengoba kwaziwa, isibuko se-polycarbonateyi-substrate emelana nomthelela kakhulu. Isibuko sethu se-polycarbonate (PC) siyisinqumo esihle uma udinga indawo enesibuko enokumelana nokushisa okuphezulu namandla omthelela. Ezinye izinzuzo ze-isibuko se-polycarbonateamandla omthelela omkhulu, ukuqina, ukumelana nokushisa okuphezulu, ukucaciseleka nge-crystal nokuqina kobukhulu. Sinobukhulu obungu-0.25 ~ 6 mm, usayizi ka-915 * 1830 mm, umbala ocacile wesiliva otholakalela ukuhleleka ngamasevisi wokusika osayizi.
Igama lomkhiqizo I-Polycarbonate Mirror, i-PC Mirror, Ishidi Elilinganisiwe le-Polycarbonate
Usayizi I-36 ″ x 72 ″ (915 * 1830 mm), ukusika kosayizi ngokwezifiso
Ubukhulu .0098 ″ kuye .236 ″ (0.25 - 6.0 mm)
Izici Amandla omthelela ophezulu, ukuqina, ukukhanya kwe-crystal
Surface nge PE ifilimu
I-Polycarbonate isibuko plastic idlula kalula ingilazi yezindawo ezidinga izinto ezinomthelela ophakeme ngenkathi igcina izinga eliphakeme lokucaca kwe-crystal.
Izicelo Ezijwayelekile Faka:
Ezokuphepha nokuphepha - Izibuko zokuhlola, izivikelo zobuso, izakhiwo zokuhlunyeleliswa kwezimilo, onogada bemishini, izibuko zokubona
Ukwakhiwa Kwezentengiso - Izibuko zesikhungo sokufaneleka, izibuko zokubuka, nezibuko zangasese
Indawo Ekhonjiswayo Yokuthenga Nezimpawu - Ukuboniswa kwe-Endcap, ukuboniswa kwezimonyo, ukuvalwa kobucwebe, ama-sunglass racks, nezimpawu zokuthengisa
Izimonyo & Amazinyo - Izibuko ezikhulisayo nezibuko ezihlanganisiwe
Imboni Yezimoto - Ukunquma kwangaphakathi, izibuko, nezinsiza
Sebenzisa isibuko esingu-1/8 ekufakweni okuncane. I-24 ″ x24 smaller noma incane ukubonisa okuhle okusondele. Uhlelo lokusebenza olujwayelekile lusetshenziselwa isikebhe, i-camper, indawo yokuthengisa, njll lapho umbukeli esondele kakhulu esibukweni. Lokhu kushuba kubuye kube kuhle kuma-Table Tops abekwe ngaphezulu kwendwangu yetafula (kuhle ngemicimbi). Sebenzisa isibuko esingu-1/4. ekufakweni okukhudlwana ngaphezu kwama-24 ″ x24 ″.
Security Mirror esitolo: sebenzisa i-1/4 ″ - ku-30-50ft ukukhombisa kuzophanjukiswa kungakhathalekile ukuthi ukukhweza kuyisicaba kangakanani. Ungahle ufune ukuhlola i-1 pc yalolu hlobo lokufaka.
Amakamelo Athiyetha Nedansi: sebenzisa u-1/4 ″ - khumbula ukuthi isibonakaliso ASIZOFANA nengilazi - kepha isibuko sePlexiglass sizosetshenziswa kulolu hlelo lokusebenza ukuphepha - hhayi ikhwalithi yokubonisa. Ukuboniswa kuzoba kuhle njengokuthamba kokufakwa.
Amakilabhu nezindawo zokudlela: sebenzisa u-1/4 safety ukuphepha namandla.
Uma usebenzisa ngezikulufo zokufaka, uzothola ukuhlanekezela ekubonisweni. Udinga i-Plexiglass Drill Bit yokwenza umgodi. Sithembe - uzophula noma uqhekeze ipulasitiki ngensimbi. I-Double Face Tape - indlela elula yokukhweza. Isinamathelisi Esisuselwa Emanzini - isixazululo unomphela ebusweni be-FLAT.
Sebenzisa imikhiqizo yeBrillianize noma yeNovus ukuhlanza nokususa ekuqaleni. Noma insipho namanzi. Ungasebenzisi i-Windex noma i-409. Inzuzo ukuthi isibuko se-polycarbonate NGEKE sephule futhi singaphatha amazinga okushisa aphezulu (250F). Ilungele iziteshi zamaphoyisa, izigceme zabagula ngengqondo, amajele noma okunye ukufakwa okunamandla okuphuka. Isibuko sePolycarbonate asinakususwa nakancane imihuzuko. Ngeminye imininingwane, sicela ufonele. Sekuyiminyaka engama-20 sidayisa isibuko futhi sisiza amakhasimende ethu ukuthi akhethe izinto ezifanele zokufaka isicelo.
Ishidi le-polycarbonate elilinganisiwe
ishidi lesibuko le-polycarbonate